उवासंघ चितवनमा नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : औद्योगिक नीतिमा एकमत हुनुस् : मन्त्री भट्ट – Chitwan Post
उवासंघ चितवनमा नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : औद्योगिक नीतिमा एकमत हुनुस् : मन्त्री भट्ट
भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको ५३औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनअन्तर्गत आज (मंगलबार) नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान हुँदैछ ।
आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा राजु श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रमान शाक्यबीच चुनावी भिडन्त हुँदैछ । अध्यक्षका उमेदवार श्रेष्ठ संघका वर्तमान अध्यक्ष सहनलाल प्रधानसँग पराजित भएका उमेदवार हुन् भने अर्का उमेदवार शाक्य तत्कालीन अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईसँग पराजित भएका उमेदवार हुन् । चुनावी कार्यतालिकाअनुसार आज बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानमा तीन हजार ७८२ मतदाता सहभागी हुँदैछन् ।
१८ पदका लागि २७ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठको प्यानलबाट कार्यसमिति सदस्यको उमेदवारमा वाणिज्यतर्फ चेतनारायण सापकोटा, थिरप्रसाद धिताल र पाण्डव ढकाल छन् भने उद्योगतर्फ भानुभक्त न्यौपाने र महिलातर्फ रजनी मास्के छन् ।
शाक्यको प्यानलबाट कार्यसमिति सदस्यको उमेदवारमा वाणिज्यतर्फ आनन्द रावत, बद्री पौडेल, लक्ष्मी रिमाल पौडेल र राजेन्द्र सिग्देल, उद्योगतर्फ अशोक अधिकारी, ई. कृष्ण रिजाल, विनोद पौडेल, योगिता पिया, लीलबहादुर क्षेत्री र सोमप्रसाद काप्री तथा महिलातर्फ विमला अधिकारी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तीन उपाध्यक्ष यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
सोमबार साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक नीतिको विषयमा उद्योगी व्यवसायी एकमत हुन आग्रह गरे । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको ५३औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको सोमबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टले औद्योगिक नीति कस्तो बनाउने त्यस विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले एकमत बनाउन सुझाए ।
‘औद्योगिक नीति कस्तो बनाउनेबारेमा एकमत लिएर आउनुस्’, उनले भने, ‘उत्पादित वस्तुले बजार कस्तो खोज्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त्यो लिएर आउनुस्, आर्थिक लगानीको अनुकूल नीति छैन भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’ महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार व्यवस्थापन सरकारले नै गर्ने उनले बताए ।
सबै राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको समन्वयमा नै व्यवसाय निर्धारण गरिएकाले करको विरोध गर्न आवश्यक नरहेको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । ‘असाध्यै कर वृद्धि भयो भनेर महानगरको ध्यानाकर्षण पनि भएको छैन, उद्योग वाणिज्य संघकै सुझावका आधारमा कर निर्धारण गरेका हौँ’, उनले भनिन् ।
पत्रकार पौडेल र युवा उद्यमी कँडेल पुरस्कृत
उद्योग वाणिज्य संघले हरेक दुई÷दुई वर्षमा वितरण गर्ने उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर दैनिकका चितवन संवाददाता रमेशकुमार पौडेलले प्राप्त गरेका छन् । ५१ हजार रूपैयाँ राशिको सो पुरस्कार संघको ५३औँै वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा पत्रकार पौडेललाई प्रदान गरिएको हो । पत्रकार पौडेलले पत्रकारितामार्फत यहाँको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संघले अधिवेशनको अवसरमा एक जना पत्रकारलाई उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । त्यस्तै, संघको हीरालाल सन्तुदेवी युवा उद्यमी पुरस्कारबाट राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेल पुरस्कृत भएका छन् । नर्वेजियन प्रविधिबाट नवीनतम व्यवसाय गरेका कँडेललाई एक लाख रूपैयाँ राशिको पुरस्कारले पुरस्कृत गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघको आगामी कार्यकालका लागि संस्थापनले गोलाप्रथाबाट उमेदवार छनोट गरेको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति र नेकपा चितवनका अध्यक्षबीच साधारण सभामा नै आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । कांग्रेस सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले गोलाप्रथाको विरोध गरे भने नेकपा अध्यक्ष यमबहादुर परियारले गोलाप्रथाको बचाउ गरे ।
‘नेतृत्व चयनमा गोलाप्रथा गरेर गलत नजिर नबसालौँ भनेका हाँै’, कांग्रेस सभापति श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वअध्यक्षहरुसँग पटकपटक छलफल गरेर असहमति पनि राखेका हौँ । तीन हजार सात सयभन्दा बढी मतदाता भएको ठाउँमा कसैलाई गोला प्रथाबाट जिताउने अधिकार कसैलाई छैन ।’
कसैको पछि लागेर भोट नमागेको भन्दै उनले पद्धतिसँग मात्रै असहमति राखिएको बताए । गोलाप्रथाप्रति अझै पनि आफ्नो विमति निरन्तर रहेको उनले बताए ।
पूर्वअध्यक्षहरुले गर्न खोजेको सहमतिमाथि कुठारघात भएको नेकपा अध्यक्ष परियारले बताए । राजनीति गर्न नहुने ठाउँमा कांग्रेसले झन्डा लिएर हिँडेको उनले आरोप लगाए ।
‘पूर्वअध्यक्षहरुलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुले धेरै मेहनत गर्नुभयो सहमतिका लागि’, उनले भने, ‘तपाईंहरुमाथि नै कुठारघात भएको छ, यस्तो गर्न हुँदैनथ्यो । कांग्रेसका मित्रहरुले त्यसो गर्न नहुने थियो ।’
डेढ महिनामै रंगशाला मैदानको ८० प्रतिशत काम